မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ရောင်းရန် ဆိုင်ခန်း / ရုံးခန်းများ | ShweProperty.com
ရောင်းရန် - ဗဟန်းမြို့နယ် ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းတွင် မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိသည်။
Property ID: S-1202367
ရောင်းရန် - ဗဟိုလမ်းမ မေးတင်မြေညီထပ်ဆိုင်ခန်း(မြေပိုင်) စတီးထပ်ခိုးအပါ…
- အိမ်နံပါတ် ၁၀၆A, ဗားကရာလမ်းနှင့် မင်္ဂလာလမ်းကြား ဗဟိုလမ်းမေးတင် မြေညီထပ်၊ - မျက်နှာစာ 12.5' x အနံ 50' x 15' အမြင့် - စတီးထပ်ခိုး…...
- အိမ်နံပါတ် ၁၀၆A, ဗားကရာလမ်းနှင့် မင်္ဂလာလမ်းကြား ဗဟိုလမ်းမေးတင် မြေညီထပ်၊ - မျက်နှာစာ 12.5' x အနံ 50' x 15' အမြင့် - စတီးထပ်ခိုး…
Listed 24 June 2019
Tun Lin Zaw
Advertiser : Tun Lin Zaw
ဗဟိုလမ်း, ဗားကရာလမ်း နှင့် မင်္ဂလာလမ်းကြား
Property ID: S-1201347
Office no : 09777930357
ရောင်းရန် - LT1906005894: Office space for Sale in Insein
* Location - Insein (Sky Bow Tower) * 8 storey building * Ground and 1st floor for sale * Size - 6,637 sq-ft * Bathroom * Air cons * Mezzanine floor * CCTV Security System * Elevator * Generator * Safety Car Parking * Security guard * 4,500 lakhs for sale...
* Location - Insein (Sky Bow Tower) * 8 storey building * Ground and 1st floor for sale * Size - 6,637 sq-ft * Bathroom * Air cons * Mezzanine floor * CCTV Security System * Elevator * Generator * Safety Car Parking * Security guard * 4,500 lakhs for sale
Listed 21 June 2019
Property ID: S-1201238
Asking Price : 4,500 သိန်း
Mobile : 09796201406, 09783697849
Office no : 018605255, 09796201406, 09774833350
ရောင်းရန် - ရွှေပြည်သာမြို့နယ် တွင်မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိသည်။
Property ID: S-1199164
Office no : 09-453067351, 09-453067352, 09-263139906, 09-42172
ရောင်းရန် - အ​ဝေး​ပြေးယာဉ်​ရပ်​နားစခန်း
တောင်ကြီး ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
​အကျယ်​အ၀န်း ၂၇၀၀ စတုရန်း​ပေ။ 3RC။ စီးပွာ​ရေးလုပ်​ငန်းလုပ်​ကိုင်​ရန်​အထူး ​ကောင်းမွန်​သည်​။...
​အကျယ်​အ၀န်း ၂၇၀၀ စတုရန်း​ပေ။ 3RC။ စီးပွာ​ရေးလုပ်​ငန်းလုပ်​ကိုင်​ရန်​အထူး ​ကောင်းမွန်​သည်​။
Property ID: S-1198965
ရောင်းရန် - မရမ်းကုန်းမြို့နယ် တေးနုယဉ်လမ်းတွင် 1Rc လုံးချင်းအိမ်…
Listed 23 April 2019
Property ID: S-1196193
Asking Price : 9,900 သိန်း
ရောင်းရန် - ရန်ကင်းမြို့နယ် မိုးကောင်းလမ်းအနီးတွင် မြေကွက် ရောင်းရန်ရှိသည်။…
Property ID: S-1196191
Asking Price : 12,500 သိန်း
ရောင်းရန် - Office Rent in Kamaryut (ID-54)
3800 sqft office space for rent in Kamaryut Township. Near Junction Square. Asking price is 1.5 USD per sqft (Nego) Office Rent in Kamaryut (ID-54) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. ကမာရွတ်မြို့နယ်…...
3800 sqft office space for rent in Kamaryut Township. Near Junction Square. Asking price is 1.5 USD per sqft (Nego) Office Rent in Kamaryut (ID-54) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. ကမာရွတ်မြို့နယ်…
Listed 8 April 2019
Property ID: S-1195737
Asking Price : 5,700 USD
ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့နယ်မြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ချမ်းသာရွှေပြည်အိမ်ရာ…
Listed 1 April 2019
Property ID: S-1195351
ရောင်းရန် - မရမ်းကုန်းမြို့နယ် (၇)မိုင် ပြည်လမ်းသွယ် တွင် မြေကွက်…
Property ID: S-1195342
ရောင်းရန် - Code-7823 လှိုင်သာယာမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဆိုင်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Listed 22 February 2019
Property ID: S-1191158
ရောင်းရန် - Code-7329 ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်တွင် ရေကျော်ဈေးအနီးတွင် ၂ခန်းတွဲဆိုင်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Property ID: S-1186402
ရောင်းရန် - Code-7055 အလုံမြို့နယ်တွင် ဆိုင်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Listed 20 December 2018
Property ID: S-1183989
ရောင်းရန် - Code-7054 အလုံမြို့နယ်တွင် ဆိုင်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Property ID: S-1183987
ရောင်းရန် - Shops(ဆိုငျခနျး)း At The Center Of Myo Ma Market Lashio(CBD) For Sale
လားရှိုး ၊ ရှမ်းပြည်နယ်
Listed 13 December 2018
Advertiser : Win Tun Thein
Property ID: S-1183381
Asking Price : 9,800 သိန်း
Office no : 09255120818, 09255120820
ရောင်းရန် - သီရိရတနာလက္ကားဈေး
kyaw nway zin
Advertiser : kyaw nway zin
Property ID: S-1183300
Office no : 095117053
ရောင်းရန် - အင်းစိန် မြို့နယ်/ မြေညီထပ် အရောင်း
GOLDEN FUTURE LAND REAL…
Advertiser : GOLDEN FUTURE LAND REAL…
က - ၃ လမ်း
Property ID: S-1180146
Mobile : 09770780500
Office no : 09770780600, 09770780400
ရောင်းရန် - မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊(၂၈) ရပ်ကွက်တွင် လုံးချင်းအိမ်ရောင်းမည်
Advertiser : Than Oo
Property ID: S-1023996
Office no : 09-43152297, 09-421025402,01-249380
ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ န၀ဒေးအိမ်ယာ ရှိ RC 1ထပ် ရောင်းမည်
Thet Yu Nge
Advertiser : Thet Yu Nge
Property ID: S-1035112
Office no : 09-425022865, 01-9648129, 01-9648130, 09-5128625,0
ရောင်းရန် - ပန်းဘဲတန်း
၂၇လမ်း ရန်ကုန်မြို့၏အချက်အခြာအကျဆုံးDown town ဧရိယာတွင်တည်ရှိသော မြေညီ အထပ်ခိုးပြည့် ပါဝင်သောပြင်ဆင်ပြီးအခန်းဖြစ်သည်…...
၂၇လမ်း ရန်ကုန်မြို့၏အချက်အခြာအကျဆုံးDown town ဧရိယာတွင်တည်ရှိသော မြေညီ အထပ်ခိုးပြည့် ပါဝင်သောပြင်ဆင်ပြီးအခန်းဖြစ်သည်…
Advertiser : myo khant
Property ID: S-1169159
Office no : 09777170922
မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန်ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း ရောင်းရန် Real Estateရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များ
မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း ကချင်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း
ကရင်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း ကယားပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း မွန်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း
ရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း ရှမ်းပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း
ချင်းပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း နေပြည်တော် ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း
မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန် property များဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် property များပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် property များကချင်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် property များ
ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် property များကယားပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် property များမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် property များမွန်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် property များ
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် property များရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် property များတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် property များရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် property များ
ချင်းပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် property များမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် property များစစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် property များနေပြည်တော်ရှိ ရောင်းရန် property များ
မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများမြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒိုများ
မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများမြန်မာပြည် ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ်များ
မြန်မာပြည် ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်
မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များမြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း/ဆိုင်ခန်းများ
shop, for sale in all townships,